Iflegi elandelayo yeXiaomi inokurekhoda ividiyo ngesisombululo se-8K | I-Androidsis
Iflegi elandelayo yeXiaomi inokurekhoda ividiyo ngesisombululo se-8K
Ingaphezulu kokucacileyo Xiaomi yenye yeenkampani ezinobuchule obuninzi kushishino lwee-smartphone ezigcweleyo okwangoku kwihlabathi liphela. Le nkampani yaseTshayina ikhuphisana ngokuthe ngqo nezigebenga ezikwicandelo elinje ngeSamsung, iHuawei kunye neApple, ithatha indawo enkulu kwisabelo sentengiso ngenxa yezixhobo zayo ezinexabiso elihle lemali eliboniswa kwingxelo yayo enkulu.
IXiaomi ihlala isisiqhelo ezindabeni ngenxa yomnqweno wayo wokusoloko izisa izinto ezintsha kubathengi. Nokuba zihardware kunye / okanye imisebenzi eyahlukeneyo, kunye namaxabiso, ii-smartphones zabo zinento abanye abangayenziyo, yiyo loo nto abantu abaninzi bekhetha olu phawu. Into eceba ukuyiphumeza, ukomeleza eli nqaku sifuna ukuseka, yi Inkxaso yokurekhoda ividiyo eyi-8KIsisombululo esiphakamileyo kangangokuba kude kube ngoku asiboni kuyo nayiphi na ividiyo erekhodwe yifowuni ephathekayo -kungekho nje ezimbalwa ezifana I-Nubia Z20 kunye Umlingo obomvu 3S- okoko ubuninzi obunikezelwa namhlanje yi-4K.
Ukufunyanwa okutsha okwenziwe ngu XDA-Developers ityhila ukuba iflegi elandelayo yeXiaomi inokuxhasa ukurekhodwa kwevidiyo ye-8K. Ngokungafaniyo neefowuni ezichazwe apha ngasentla, Le fowuni ingaziwayo yeXiaomi iya kurekhoda kwii-fps ezingama-30 hayi kwi-15 fps.
Ukufunyanwa kwenzelwe i-teardown yenkqubo ye-MIUI yekhamera kuhlaziyo lwe-MIUI 11 beta lwamva nje lwase China. Umtya kwi-APK ye-teardown ibonisa ukuba ifowuni iya kuba nakho ukurekhoda i-8K kwi-30fps. Ikwabandakanya umfanekiso we-8K 30 @ FPS onokuthi ube luphawu kwi-app xa utshintshela kwimowudi yokurekhoda.
IXiaomi Mi MIX Alpha ityhila ikhamera ye-Samsung Galaxy S11
Ayaziwa ngokuqinisekileyo ukuba yeyiphi imodeli eya kukhethwa ukuxhasa le ndawo yokurekhoda, kodwa sele kukho amarhe kunye nengqikelelo ebonisa ukuba I-Redmi K30 Pro ene-Snapdragon 865 yifowuni eza kuza neli nqaku kwixesha elizayo elingekude kakhulu. Ukuba kunjalo, kwikhosi yesemester yokuqala yonyaka ozayo iya kuqalisa ngalo msebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iflegi elandelayo yeXiaomi inokurekhoda ividiyo ngesisombululo se-8K
Sharp AQUOS zero2: Isiphelo esitsha sophawu
I-Galaxy S7 iyaqhubeka nokufumana uhlaziyo lokhuseleko